Nri a na-ahụkarị nke Seville | Njem akụkọ
La Ọrịa Spanish Ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu ma dị iche iche, yabụ n'agbanyeghị ebe ị na-aga, ị ga-eri ihe ịtụnanya. Ọ bụrụ na ihe atụ, ị na-aga maka ije n'ógbè nke Sevilla ị ga-esi ísì efere na anụ, azụ na akwụkwọ nri kamakwa ezigbo mmanya na desserts.
Taa na Actualidad Viajes, nke kacha mma ahụkarị nri nke Seville.
1 Gastronomy nke Seville
3 Cod na tomato
4 Azụ eghe eghe
5 Andalusian siri nri
6 Ọdụ ehi
7 Dogfish na Adobo
8 squid nwa grilled
9 Ndị agha Pavia
10 Àkwá Flamenco
11 Torrijas na sweets convent
12 anụ skewer
15 Roe nwere ụtọ
17 Chickpeas Na Akwụkwọ nri
Gastronomy nke Seville
Mbụ niile, ọ ga-kwuru na gastronomy nke a akụkụ nke Spain Ndị Arab na-emetụta ya nke ukwuu., onye kpọgidere gburugburu ebe a n'oge emepechabeghị anya ma nọrọ ogologo oge iji metụta asụsụ na nri.
Ihe ndị a na-emekarị bụ anụ ezi, sausaji n'ozuzu, nwa atụrụ, efere akwa, omelet, ọbọgwụ, ụdị salad dị iche iche nke ghọrọ oge ochie, na n'ezie olive na mmanụ ha. Ọ dịghị ihe dị mma ịsacha nri Sevillian karịa mmanya.
O nwere ike ịbụ a ofe oyi ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ dị nro na ọ bụ nnọọ Sevilian. A na-eji akwụkwọ nri ise mee ya: kukumba, tomato uhie na nke chara acha, yabasị, galik, ose na-acha uhie uhie na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ọ bụ ezie na n'ezie, e nwere mgbe variants. Mgbe ahụ tinye nnu, mmanya na mmanụ olive na-amaghị nwoke ma dị njikere, nwee obi ụtọ!
Tomato bụ eze zuru oke nke efere a a na-ewerekwa ya dị ka vitamin. Enwere ndị na-agbakwunye karọt, achịcha, ngwa nri dị iche iche, akwụkwọ nri ndị ọzọ ma ọ bụ cumin.
Cod na tomato
Nkwadebe nke efere a adịghị mgbagwoju anya. A ga-ejiri mkpụrụ osisi ahụ ruo otu ụbọchị, mgbe ahụ, n'iberibe ya, gbanye ya na mmanụ oliv ma tinye ya na ihendori na tomato, yabasị na ose ndụ ndụ.
Azụ eghe eghe
Na-aga n'ihu na azụ, a na-eji efere ọzọ eme ya azu pere mpe na obere ọkpụkpụ azụ. Ọmụmaatụ, mullet uhie, mackerel ma ọ bụ anchovy, naanị ịkpọ aha ole na ole. Mgbe ụfọdụ, a na-agbakwunye squid ma ọ bụ molluscs ndị ọzọ chopped.
A na-esi n'ime ntụ ọka na-agafe azụ̀ ahụ ma ghee ya n'ụba mmanụ oliv na-ekpo ọkụ nke ukwuu ka ha ghara ịmịkọrọ ya nke ukwuu. Ọ bụkwa ya, pụọ rie nri. Ọbụna a na-eje ozi na cones akwụkwọ na Ọ bụ nnukwu ihe na-ewu ewu nri e ghere eghe nke Sevilla.
Andalusian siri nri
Ọ dị mfe anụ stew, ụdị dị iche iche, nke a na-esi na mkpo na akwụkwọ nri. O nwere chickpeas na agwa na efere jupụtara na efere. Ọ bụ stew na-atọ ụtọ maka ụbọchị kachasị oyi na mpaghara, nke na-adịghị ọtụtụ. Mgbe ụfọdụ, a na-eji broth ahụ eme ihe, dị ka consommé, a na-etinyekwa nanị ntakịrị ntakịrị sherry.
Mfe: oxtail esiri mmanya, galik, yabasị na oge. N'ihi dị nnọọ tọrọ ụtọ ma ọ bụrụ na ị na-eso ya na ezi achịcha, agaghị echefu echefu.
Dogfish na Adobo
Ọ bụ nri a ma ama na ụlọ oriri na ọṅụṅụ Sevilian. Ọ bụ dabere na azụ ọcha na, mgbe awa nke marinating dị iche iche ngwa nri, a na-agafe ya na ntụ ọka na eghe na mmanụ ọkụ. Obere mmanya ma ọ bụ otu iko biya oyi bụ ezigbo enyi gị.
squid nwa grilled
Mfe mere efere. Ọ bụ maka isi nri chiripones na grill, mana inwe anya dị mma ka ị ghara ịhapụ ha raw ma ọ bụ sie ya.
Ndị agha Pavia
Ọzọ na cod mmiri na-eme ihe. A na-egbutu azụ ahụ n'ime ibe, hapụ ya ka ọ gbanye, na-agafe na ntụ ọka ma ghee ya na mmanụ oliv. Mgbe ụfọdụ, a na-agwakọta ntụ ọka ahụ na saffron, yist na mmiri nnu. Marinade mara mma bụ lemon, brandi na mmanụ oliv. Ọ na-abụkarị usoro izizi ma ọ bụ ihe oriri ma na-ejikarị ose eme ya.
Onye isi nri ọ bụla nwere ụdị nke ya, mana ọ bụrụ na-amasị gị akwa, gaa maka ha niile. The kpochapụwo uzommeputa bụ àkwá na akwụkwọ nri. A na-eme ya n'ite ụrọ, nsen na-agbawa n'ebe ahụ ma tinye peas na asparagus na ihe niile na-esi nri ruo mgbe nsen ahụ mechara.
Tupu ị na-eje ozi, a na-agbakwunye mpekere ham ma ọ bụ chorizo ​​​​ma ọ bụ artichokes na ọ na-aga ozugbo na tebụl, dị ọkụ.
Torrijas na sweets convent
Ihe ụtọ n'ebe obibi ndị nọn bụ omenala, ọkachasị n'oge ezumike na izu nsọ. n'ime otu bụ pestiños, mmanya donuts, cutlets cider, achịcha mmanụ, las ntụ ntụ achịcha ma ọ bụ ndị ama ama isi obodo San Leandro.
Maka akụkụ ya A na-eji mmanụ aṅụ, cinnamon na mmanya mee Torrijas.
Dị mfe iri n'ihi na ọ bụ a skewer nwere iberibe ọkụkọ ma ọ bụ anụ ezi nke a na-agbakwunye prawn, cuttlefish, sausaji na ihe ndị ọzọ.. A na-eji ígwè mee skewers ndị ahụ, ha na-atụ ihe na-erughị 25 centimeters, a na-esikwa ya na griddle ma ọ bụ na grill.
Ejula ọ na-amasị gị? Ọfọn, na Seville ị nwekwara ike iri ha. Sevilian Ezi ntụziaka na-eme ka ha na galik, fennel, ọtụtụ ụdị, pennyroyal na ụdị ejula ndị a ma ama bụ chili ejula.
A na-ebuli ejula ọtụtụ ugboro, atọ ma ọ dịkarịa ala, mgbe ahụ, a na-esi ya ma mgbe ọ dị nro, a na-agbakwunye ihe ndị ọzọ ka ihe niile wee sie maka nkeji iri atọ ọzọ.
.Dị Sanwichi mmanya Emere ya Serrano ma ọ bụ ham Iberian ma ọ bụ anụ ezi, ose e ghere eghe na mpekere tomato. Ha bụ ndị enyi kacha mma nke fries French na Mayonezi.
Roe nwere ụtọ
nne mgbada nke hake bụ ihe a na-ahụkarị mgbe ị na-akwadebe efere a si Seville. A na-esi nri ya na mmiri na anyanwụ mgbe ha nọ n'ime ite ahụ, a na-eme ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa nke yabasị, tomato na ose.
Ka mgbada ahụ dị jụụ, bee ya n'ime iberibe ma gwakọta ya na mincemeat, mmanụ aṅụ, ntakịrị nnu na mmanya mmanya, nke ahụ bụ ya.
Isi mmalite ya bụ stew Andalusian ma ọ bụ otu n'ime ndị ahụ efere ndị e ji ihe fọdụrụ nke ọzọ mee. N'okwu a, a na-egweri ihe fọdụrụ na stew ma ọ bụ stew ahụ, anụ na soseji, gwakọta ma tinye ya na achịcha.
nri ahụ ọ bụ ihe mkpuchi kpochapụ site na ebe a ma na-eje ozi na Montaditos na-ekpo ọkụ. Na-ekwu maka montaditos, e nwere ọtụtụ iche na Seville, ma ndị kasị ewu ewu bụ n'úkwù na ham, na Piripi, na Serranito na anyị kpọrọ aha n'elu na N'ezie, pringa. A na-ejikwa biya rie ha.
Chickpeas Na Akwụkwọ nri
Ọ bụ efere Sephardic ma ọ bụ tapa a ma ama na ama ama. Ị ga-ahụ ya nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị gaa Seville n'oge izu ụka dị nsọ. A na-esi nri na chickpeas iche iche. Mgbe ahụ, a na-agwakọta ihe niile na pan ma ghee ya na obere okpomọkụ. Achịcha e ghere eghe bụ ezigbo enyi ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Sevilla » Nri a na-ahụkarị nke Seville